रोचक खबर – Page4– rastriyakhabar.com
गरीबी र दरिद्रताको अन्त्य गर्न अनिवार्य घरमा रोप्नुहोस् यी दुई बिरुवा
गरीबी र दरिद्रताको अन्त्य गर्न अनिवार्य घरमा रोप्नुहोस् यी दुई बिरुवा, जानकारीको लागि सेयर गरौं. गरीबी र दरिद्रताको अन्त्य हुन्छ, मात्र घरमा लगाउँनुहोस् यी दुई बृक्ष वास्तु शास्त्रमा घरमा बोट बिरुवा लगाउँनु अघि केही नियमहरु बताईएको छ । घरमा सही तरिकाले बोट बिरुवा नलगाए गृहस्वामी सहित परिवारको अन्य..
बिश्वमा सेक्स सम्बन्धि अनौठा १८ नियम
एजेन्सी /सेक्सको बारेमा प्रत्येक देशको आ—आफ्नै परम्परा र धारणा रहेका छन । कुनै देशमा सेक्सका बारेमा कडा नियम कानुनहरु रहेका छन भने कुनै देशमा उदारता पाउन सकिन्छ । कुनै देशमा सेक्सको बारेमा विचीत्रको नियम छ । यस्ता छन् नियमहरु १. कोलम्वियाको काली भन्ने ठाउँमा बिवाह पश्चात आफ्नो आमाको अगाडि मात्र..
ब्रालाई कसरी लगाउनु राम्रो
महिलाहरुले लगाउने भित्री बस्त्रहरु मध्ये उनीहरुको सर्वाधिक चासो ब्रा मै हुने गर्छ । महिलाहरुको आ–आफ्नो रुची अनुसार ब्राको ब्राण्ड देखि त्यसको स्टाइल, साईज आदीमा हुने गर्छ । सोही कुरालाई ध्यानमा राखेर ब्रा खरिद गरेपनि महिलाहरुले छनोटमा गल्ती गरिरहेका हुन्छन् । महिलाहरुले ब्रा खरिद गर्दा कस्तो..
ओझेलमा बेहुली ढुंगा
पाँचथर सदरमुककामबाट करिब १२ कोस टाढा पर्ने साविक रवी गाविस हाल मिक्लाजुङ–४ मा बेहुलीजस्तै रहेको ढुंगा जसलाई स्थानीय बेहुली ढुंगा भन्ने गर्छन् । स्थानीयस्तरमा यसको जति चर्चा हुन्छ बाहिर त्यति प्रचार हुन सकेको छैन । यसको प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा पर्यटीकयस्थलको प्रचुर सम्भावना रहेको..
काठमाडौं । यौन जिवन सुखी बनाउने धेरै उपायहरु रहेका छन् । पार्टनरलाई गर्दा चाहीँ खुशी पार्न सकिन्छ,त्यसलाई विशेष महत्व ख्याल गर्नाले यौन जिवन सोचेको भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ । श्रीमान-श्रीमतीबीच हुने यौन सम्पर्कले कस्लाई बढि यौन आनन्द भएको होला रु पुरुष यौन साथीलाई रमाइलो हुँदा आफूलाई दुई गुणा..
सेक्स गर्दा कोरोना भाइरस सर्छ कि सर्दैन ?
कोरोना भाइरस कपालको रौंभन्दा ९ सय गुणा सानो हुन्छ । यसकारण यसले मानिसलाई सजिलै आफ्नो सिकार बनाउँन सक्छ । कोरोना भाइरस विश्वका ८० देशमा फैलिइसकेको छ । आखिर कोरोना भाइरस कसरी फैलिन्छ ? कोरोना भाइरस कुनै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रवक्ताका अनुसार कोरोना..
इतिहासमा कसैले नचिनेका बहादुर शाह ! शान्ति बाटिकामा बहादुर शाहको रोचक प्रसङ्ग
यो हो विश्वकै सबैभन्दा महँगो कार
चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हालै विश्वकै सबैभन्दा महँगो कार खरिद गरेका छन् । दुनियाँको सबैभन्दा महँगो कार बुगाटी ला वायोएवर हो । हालै आफ्नो क्लब युभेन्टसले इटालियन सिरी ए को उपाधि जितेको खुसियालीमा रोनाल्डोले उक्त कार खरिद गरेका हुन् । दुनियाँकै महँगो उक्त कारको मूल्य कति होला ? समाचार..
आइतवार, असार २१, २०७७ मा प्रकाशित
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएसँगै विभिन्न प्रकारका दृश्य सार्वजनिक भएका थिए । तर अहिले एउटा तस्बिर समाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । जहाँ एक व्यक्तिले सुनको मास्क लगाएर घुमिरहेका देख्न सकिन्छ । भारतको पुणेका शंकर कुराडे नामका व्यक्तिले २ लाख ८९ हजार भारतीय रुपैयाँ (४ लाख ६० हजार नेपाली..
के सेक्स शारीरिक कसरत हो ?
एजेन्सी । हाम्रो समाजमा अझैपनि सेक्सका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सकिदैन् । तर, सत्य के हो भने नियमित सेक्स स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण पाटो हो । सेक्सले ब्लड प्रेसर कम गर्छ र कोलस्ट्रोलमा पनि सुधार हुन्छ । सर्वेक्षणका अनुसार नियमित सेक्सले हर्टअट्याक अर्थात हृदयघात र स्ट्रोकको सम्भावनालाई ५०..
सपनामा मरेका मानिस देखिन्छन् भने यस्तो हुनसक्छ कारण
एजेन्सी । जीवन र मरण जीवनको सबभन्दा ठूलो सत्य हो । जन्मिने मान्छे मर्नैपर्छ । आफूनजिक रहेका मृत व्यक्ति कहिलेकाहीँ सपनामा आउँछन् । यस्तो अनुभव अनौठो रहस्यमय हुन्छ । मनोविज्ञानका अनुसार सपनाहरूमा विशेष सन्देश लुकेका हुन्छन् । सपनामा देखापरेर मृत व्यक्तिहरूले निर्देशन वा आश्वासन दिन्छन् । पछि हुने..
स्त्रीले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको सेक्स अनुभव गर्न चाहने एक अध्ययनले देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो–अनौठो यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउने तथ्य उक्त अध्ययनबाट देखिएको हो । युवतीहरुले यौनको बारेमा कस्ता–कस्ता कुरा सोच्छन् भन्ने विषयको अध्ययनको निष्कर्ष यस्तो..
मानिसको आँखा प्राय रसाइरहन्छ । मानिसको मात्र होइन पशुपंक्षीको पनि आँखामा आँसु देखिन्छ । कुनै बेला चित्त दुखेका बेला आउँने आँसु खुसी भएका बेला पनि आउँछ । कस्तो अवस्थामा आउँछ भन्ने बारे तपाईले थाहा पाउनुपर्छ । आँखामा आइलिड हुन्छ, जहाँ आँसु उत्पादन गर्ने ग्रन्थि हुन्छ। आँखाछेउको तल–माथि दुवैतिर..
यौनसम्बन्धी नसुनिएका १९ रोचक तथ्य !
यौनसम्बन्धि धेरै रोचक कुराहरूबारे थाहा नहुनसक्छ हामीले त्यस्तै केहि नसुनिएका तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छाै – यौनसम्पर्क गर्दा त’नाव कम हुनुका साथै टाउकाको पी’डा पनि निको हुन्छ । – लगभग २५ प्रतिशत पुरुष जुनसुकै समयमा पनि यौ’नस’म्पर्ककै बारेमा सोचिरहेका हुन्छन् । -यौन क्रि’याको चरम अवस्थामा..
शरीरको कुन अंगमा कोठी भएका व्यक्ति कस्तो हुन्छन ?
शरीरका विभिन्न अंग र त्यसको लक्षणका आधारमा व्यक्तिको चरित्र जान्न सकिने कुरा चर्चामा आइरहन्छ । हिन्दू धर्ममा आधारित समुद्रशास्त्रमा यसबारे वर्णन गरिएको छ। शास्त्रमा धेरै माध्यम उल्लेख छन् । जसले व्यक्तिको चरित्र संकेत गर्दछ । त्यसमध्ये कोठी पनि एक हो । शास्त्रमा शरीरको कुन अंगमा कोठी भए के फल..